Shiinaha Oscillation Nooca Double-motor Soosaarka Warshadda Culus | Huwei
Nooca 'Oscillation' Double-motor culus culus
Tusaalaha Lambarka: HW-20MC08-O
Magaca: Nooca Oscillation Nooca Laba-Bawdada ah ee Xajiyaha culus (xawaaraha la hagaajin karo)
Cabbirka: 20 ”
Mootada: Matoor shabeel oo tayo sare leh
Mugga ceeryaanta Max: 20L / H
Cajaladda Birta: ahama
huurka: ceeryaamo culus
Gawaarida weyn: way fududahay in la dhaqaaqo
Uumiyeyn culus Is anigaheshiis ah：
bannaanka & dibedda ceerinta, bakhaarka & garaashka, qoob-ka-ciyaarka faraska & maqnaanshaha
zoo, fair & festival misting, cookut & pool misting, xafladaha xafladaha dhagaxa iyo jazz, aroosyada bannaanka & soo dhaweynta qashin-qubka, aqalka dhirta lagu koriyo, beerta madaddaalada & khaaska dhacdooyinka gaarka ah, dhismaha goobta
ama goob kasta oo u baahan ka gargaar kuleylka xagaaga.
Qoyaanka culus waa mashiin labo-labo ah oo wata qalab lagu hagaajin karo si uu xawaaraha u koontaroolo, oo lagu daray ruxruxida madaxa iyo giraangiraha xagga hoose in gacanta lagu riixo, taasoo si weyn u kordhineysa faa iidada huurka culus.
1. Waqti intee le'eg ayay ku qaadataa soo saarista ceeryaamo?
Isla markiiba, marka nidaamku bilaabmo, ceeryaanta biyaha markiiba waa la soo saari karaa.
2.Suurtagal ma tahay in la soo saaro qoyaan lagu dabaqi karo?
Haa, nidaamkeenu wuxuu leeyahay xakameyn madaxbanaan oo wareejinta atomikada, wuxuu si gaar ah u hagaajin karaa xajmiga atomiga, oo ku habboon munaasabadaha kaladuwan ee shuruudaha qoyaanka.
3. Waa maxay isticmaalka tamarta iyo isticmaalka biyaha ee nidaamka qaboojinta?
Kaydinta tamarta, isticmaalka tamarta 6dii saacadoodba waa hal mar oo keliya, isticmaalka tamarta ayaa ka yar 10 jeer wax ka yar qaboojiyaha, aad u dadnimo badan, isticmaalka biyaha waxay kuxirantahay xaddiga atomiga ee aad ugu baahan tahay deegaanno kala duwan.
4. Nidaamku ma u baahan yahay dayactir?
Dayactir la'aan, nadiifinta joogtada ah ee haanta biyaha ayaa noqon karta.
5. Sidee loo rakibaa?
Nidaamka guud ahaan waxaa lagu rakibay isticmaalka munaasabadda si markaa dhammaan meelaha furan lagu dabooli karo ceeryaamo, haddii derbiga la dhejiyo, waa in laga rakibo dhulka 2.30 mitir-3.50 mitir.
6. Sidee loo qaabeeyaa nidaamka?
Shaqaalaheena farsamada waxay heleen tababar xirfadeed oo dhinacyo kala duwan ah si ay uga caawiyaan naqshadaha nidaamyada ku habboon baahida isticmaalayaasha
Joogtada gacanta ku haynta Tayada
1) Ka hor intaan amarka la xaqiijin kama dambaysta .Waxaan si adag u hubin lahayn maaddada, midabka, fiilooyinka tallaabo tallaabo ah.
2) Waxaan iibin nahay, sidoo kale amar raacis ahaan, waxaan raadraaci doonnaa weji kasta oo wax soo saar ah bilowga.
3) Waxaan leenahay erey QC ah, shey kasta waa la hubin lahaa iyaga kahor inta aan laxirin.
4) Waxaan isku dayi lahayn sida ugu fiican ee aan ku caawin karno macaamiisha xalinta dhibaatada markay dhacaan.
Degdeg deg deg ah loo siiyay, dhoofinta degdegga ah, isgaarsiinta degdegga ah.
By T / T, 30% by T / T kahor waxsoosaarka kahor iyo 70% dheelitirka T / T kahor rarka.
Waqtiga Lead: 20 maalmood
Hore: Dhererka hagaajin kara Fan Masruufka
Xiga: Fan Macaan Biyo Xiddig
Single-motor culus huurka HW-20MC08A
Nooca oscillation Single-motor culus Humidifier ...
Double-motor Humidifier culus